नेपाल पत्रकार महासंघ : बैंक स्टेटमेन्ट नहुँदा सदस्यताबाट बञ्चित गर्न मिल्छ ?
चैत्र १४, २०७७, ९:५९ AM
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाले गत वर्ष नयाँ सदस्यताको लागि आव्हान गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिनलाई आवश्यक कागजातसंगै उक्त पत्रकारले काम गर्ने मिडियाबाट पाउदै आएको तलबको बैंक स्टेटमेन्ट समेत मांगिएको थियो । धेरैले उक्त बैंक स्टेटमेन्ट बुझाएपनि । महोत्तरीमा ३९ जनाले नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन दिएकोमा यसै साता सो मध्ये ९ जनाले सदस्यता पाएका छन । तर आवेदन दिएका मध्ये अधिकांस कृयाशिल पत्रकार सदस्यता लिनबाट बन्चित रहे । नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखामा सम्पर्क गर्दा सदस्यता नपाएका अधिकांशको बैंंक स्टेटमेन्ट नभएकोले उनको नाम सदस्यताको लागि सिफारिस नगरेको जवाफ फर्कायो । एकजनाले त बैंक स्टेटमेन्ट समेत पेश गरेकोमा उनको फाईलको पछाडी बैंक स्टेटमेन्ट नभएको भनेर लेखेको र उनलाई सदस्यता नदिएको प्रतिकृया दिए ।
बैंक स्टेटमेन्ट र नयाँ सदस्यता वितरण विचको अन्तर सम्बन्ध जान्न निक्कै ईक्षा भयो र त्यसबारे सोध्दा शाखा अनुत्तरित हुदै कार्यसमितिको निर्णय भन्दै पन्छिन खोज्यो । आखिर बैंक स्टेटमेन्ट नहुदा वा हुदा समेत ति आवेदन दिएका पत्रकारहरु कसरी योग्य वा अयोग्य त ? पत्रकार हुनलाई चाहिने योग्यता र सदस्य हुनलाई चाहिने योग्यतासंगैको आवेदकले काम गर्दै आएको मिडियाको परिचयपत्र, नियुक्तीपत्र वा अन्य केहि सपोर्टिंग कागजात पर्याप्त हुनु पर्ने ठाउमा उनले बैंकको माध्यमले तलब पाए वा नपाएको बैंक स्टेटमेन्ट सदस्यता दिनकै लागि वाधक बन्नु अकल्पनिय विषय हो जस्तो अधिकांशलाई लाग्नु पर्ने हो तर सो वारे समयमै पत्रकारका नेताहरुबाट समेत पहल नभएको देखियो । मेरो बुझाईमा पत्रकार महासंघले पत्रकारको हक अधिकार प्रवर्धन गर्न मुल ध्येय, लक्ष्य र दायित्व हुनु पर्ने हो । तर सदस्यता दिनै वेला उनीहरुसंग पत्रकार महासंघबाटै अधिकार हनन हुनु दुखद हो । कहि नभएको जात्रा महोत्तरी शाखामा भएको देख्दा दुःख लाग्नु स्वभाविक हो ।
आँखाले देखेको र संगै रिपोर्टिंग समेत गरिसकेको महासंघका पदाधिकारीहरुले भने अन्धो कानुन जस्तो आँखामा पट्टी बाँधेर कागजमात्रै हेर्नु दुर्भाग्य हो । त्यहा पत्रकारको शैक्षिक योग्यता,उसको पत्रकारिताको पढाई वा तालिम,अनुभव,लेख्न क्षमता आदी आदी हेर्नु पर्नेमा ति सवै कागजातलाई वेवास्ता गर्दै बैंक स्टेटमेन्टलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु र कृयाशिल पत्रकारलाई महासंघको सदस्यताबाट बन्चित गराउनु निश्चय पनि महोत्तरीको पत्रकारिताको ईतिहासमा उपहासको कथा हुनेछ ।
यो मेरो मानिस, त्यो उसको मानिस, यो मेरो मतदाता,त्यो उसको मतादाता,यो मेरो पार्टीको त्यो अर्को पार्टीको, यो मेरो हितैसी, त्यो मेरो वैरी भनेर सदस्यता वितरण भैरहेसम्म महोत्तरीको पत्रकारितामा क्रान्ति आउनै नसक्ने बुझाई निर्णायक स्थानमा वसेकोहरुले बुझ्नु जरुरी छ । पत्रकार महासंघ हामी सवैको साझा र आफ्नो छाता संगठन होस । महासंघ भित्र पत्रकारको प्रवद्र्धन र अधिकारकै लागि हातेमालो होस भन्ने शुभेक्क्षा सहित विदा ।
Tags: रञ्जन भण्डारी
इजिप्टमा रेल दुर्घटना : ३२ जनाको मृत्यु, १६५ जना घाइते
मोदीको भ्रमणको विरोधमा उग्र प्रदर्शन, ५ जना मारिए
2 mins पहिले